एमसीसीबाट नेपाललाई केही घाटा छैनः डा. पोखरेल - DURBAR TIMES
HomeNewsएमसीसीबाट नेपाललाई केही घाटा छैनः डा. पोखरेल
एमसीसीबाट नेपाललाई केही घाटा छैनः डा. पोखरेल
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले एमसीसीबाट नेपाललाई केही घाटा नहुने बताएका छन् । नेपालले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापकीय ज्ञान र क्षमता बढाउनका लागि एमसीसी महत्त्वपूर्ण हुने उनको विश्लेषण छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. पोखरेलले भने, “एमसीसीबारे केही व्यक्ति र समूहले अनेक आशंका र भ्रम सिर्जना गरेका छन् । सरकारले त्यसर्री चित्त नबुझेका ११ वटा प्रश्न अमेरिकी सरकारलाई पठाएको छ । अर्को अर्थ लगाइएका बुँदाको थप व्याख्या गरेर स्पष्टीकरण दिनेछ । एमसीसी उपाध्यक्ष आएका बेला माइन्युट अफ मिटिङ गरेर एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्छ । एमसीसीबाट नेपाललाई केही घाटा छैन ।”
डा. पोखरेलले एमसीसी देश कंगाल भएर या पैसा नभएर ल्याउन लागेको नभई व्यवस्थापकीय ज्ञान सिक्ने र क्षमता विकास गर्ने सिक्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुने बताए । सरकारी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा महँगो बन्न गएर जनतामा भार बढेको उनले औंल्याए । उनले थपे, “सरकारी आयोजना भनेका जनताको करबाट बन्ने हुन् । सरकारी आयोजनाको कुरा गर्दा हिजो माथिल्लो तामाकोसी ३५ अर्बको थियो, अहिले ९० अर्ब पुगिसक्यो, कहिले सम्पन्न हुने हो ठेगान छैन । मेलम्चीको लागत कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । सरकारी आयोजना महँगो हुनु भनेको जनताले सेवाशुल्क तिर्ने हो ।”
जलविद्युत् आयोजनाका कुरा गर्दा खिम्ती र भोटेकोसीबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने उनले औंल्याए । उनले भने, “हो खिम्ती र भोटेकोसी आयोजना महँगो भए, धेरै पैसा उनीहरुले नै लगे तर प्रविधि र ज्ञानसीप हस्तान्तरण भएकाले सय मेगावाटभन्दा साना आयोजना आज नेपालकै जनशक्ति र निर्माण व्यवसायीबाट भइरहेको छ । हामीले बाहिरबाट लगानी ल्याउनुपरको छैन । धेरै जलविद्युत् आयोजना हामी आफैंले सञ्चालन गरेका छौं । नर्वेजियन र अमेरिकनबाट हामीले केही त पक्कै सिक्यौं ।”
उनले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको दोहोर्याए । उनले थपे, “एमसीसी परियोजना नेपाल सरकारले नै चलाउने हो, नेपालले नै खर्च गर्ने हो, पाँच वर्षभित्र खर्च गर्न नसके उसैले फिर्ता लाने हो । त्यसको अर्थ के हो भने आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसैले यो नेपालको हितमा छैन भन्नुको अर्थ छैन । लोकतन्त्रमा छलफल र बहस हुन्छ । यसमा सरकारले जनतालाई ढुक्क बनाउनुपर्छ ।”
Previous articleआज यी नदीमा बहाव बढ्ने
Next articleओलीले दायर गरेका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा
db September 10, 2021	At	5:57 am
एमसीसी मा घाटा छैन भन्ने यो कुन खाते हो ??
अमेरिकालाई खेलाचीका रूपमा लिएको भन्दै एमसिसी पास नभए आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी
MCC सम्बन्धि विषयमा देउबा सरकारले गरेको दमनलाई खबरदारी : प्रेम सुवालको सुन्ने पर्ने भाषण (भिडियो)